Isfahamka Guddoonka Golaha Shacabka ma soo af-jarayaa khilaafka Xildhibaannada? – Kalfadhi
Isfahamka Guddoonka Golaha Shacabka ma soo af-jarayaa khilaafka Xildhibaannada?
Hishiiska Guddoonka Golaha Shacabka waxaa loo arkaa bilowga xalka khilaafka Golaha Shacabka, oo wax ku dhaw bil uu soo kala dhex galay ismari-waa’ aad u qalafsanaa. Sida uu bartiisa Feysbuugga ku soo qoray, waxa uu Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xiddig sheegay iney gabi ahaanba dhameeyeen khilaafkii ka dhexeeyey Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan iyo Labadiisa Kuxigeen Cabdiwali Ibraahim Muuddey iyo Mahad Cabdalla Cawad.
“Xubnaha Golaha Shacabka, Ummadda Soomaaliyeed iyo dhamaan inta samaha jecel Waxaan si rasmi ah ugu war gelineynaa in Xubnaha Gudoonka Golaha Shacabka ay xal iyo is afgarad ka gaareen wixii khilaaf ahaa ee soo kala dhex galay” ayuu yiri Xildhibaan Xiddig. Waxa uu sheegay in ay arrinkaas ku guuleysteen Koox Xildhibaanno ah, oo iskood isu xil-qaantay. Xiddig waxa uu sheegay inuu Guddoomiye u ahaa kooxdaas.
Sida Xildhibaanno ka tirsan Golaha, oo ay ku jiraan kuwa xalka waday ay u sheegeen Kalfadhi, waxa uu Guddoonku ku hishiiyey 3 qidob:
1) In Shaqadii iyo Kulamadii Golaha dib loo soo celiyo
2) In Guddiga Maaliyadda loo dhaafo shaqadiisa
3) In Mooshiinka ka dhan ah Madaxweynaha ay ka wada hadlaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Madaxweynaha
Xildhibaan Axmed Xaaji Taaw ayaa u sheegay Kalfadhi in xalka ay gaareen Guddoonka Golaha Shacabka ay u arkaan bilowga shaqadii Golaha ee istaagtay bishii hore. “Waxay ku hishiiyeen Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Labadiisa Kuxigeen in ay wada shaqeeyaan oo ay isisaamaxaan, si ay u sii socoto shaqadda Golaha Shacabka” ayuu Xildhibaan Taaw ku yir Kalfadhi.
Xildhibaan Cabdi Cali, oo ka tirsanaa Xubnaha Guddiga iskiis isu xilsaaray isfahamsiinta Guddoonka Golaha, ayaa isna u sheegay Kalfadhi in ay hishiiskan ka rajeynayaan inuu idleeyo wax kasta oo khilaaf ahaa ee horay u dhex maray Guddoonka Golaha. Waxa uu sheegay iney sugayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu dhawaaqo qabsoomidda kulanka ugu horreeya ee Golaha. “Waxaan sugnaa waa in uu qabsoomaa kulanka ugu horreeyo ee Golaha Shacabka” ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Cali.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Kuxigeennadiisa hishiiyey wali kama aysan hadlin xalka ay gaareen, sidey ku gaareen iyo rajadooda mustaqbalka dalka. Mana jirto cid ka madax-banaan iyaga, oo ka bixisay faahfaahin ka dheeraad ah sida uu u dhacay isutanaasulkooda. Sidoo kale, waxaa fasiraad u baahan karta qodobbada sharciyadeed ee ay markii hore isku hayeen Guddoonku iyo sida ay ugu saleeyeen xalinta khilaafkoodii.
Qore: Cabdicasiis Really
Sheekh Soomow oo talo u soojeediyed Xildhibaannada iyo Madaxweynaha
Doorashada KGS oo Arbacada dhacaysa iyo Roobow oo ay adag tahay inuu ka qeybgalo